Andro: 13 Novambra 2019
ny voalohany any Torkia ..! Manomboka eo Ankara ny vanim-potoan'ny taxi-be; Ny ben'ny tanànan'i Ankara Mansur Yavaş, izay nanao fampanantenana tamin'ny fifidianana dia nampiditra ny fomba fiasa voalohany an'ny “Smart Taxi Project ına tamin'ny mpanao gazety. Ny fampiharana voalohany ao Torkia [More ...]
TTSD Transportation Inc. avy amin'ny BTS Mitsidika ny tale jeneraly; Mpikambana mpanatanteraka foibe Amerikana (BTS) mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka foibe sy filohan'ny sampana ary TCDD Taşımacılık A.Ş. Nitsidika ny biraony ny tale jeneraly Kamuran Yazıcı. dinidinika; [More ...]
Fikambananan'ny tanànan'ny Marmara sy ny ben'ny tanàna Kocaeli. Dr. Tahir Büyükakın nitsidika ireo mpivarotra tao amin'ny afovoan-tanànan'i Kuruçeşme ao Izmit ary naniry asa mahavokatra sy nifady tamin'ny olom-pirenena. Mianatra ny andrasan'ny olom-pirenena avy ao amin'ny Kaominin'i Metropolitan sy [More ...]
Malatya Little mianatra ny fifamoivoizana; Malatya Metropolitan Munisipalin'ny departemantan'ny kolotsaina sy ny sampana ara-tsosialy, dia nitsidika ny valan-javaboarin'ny fampianarana fanabeazana ny mpianatra. Fitsidihana ny vinan'ny fiofanana momba ny fitohanan'ny Fifamoivoizana napetraky ny Kaominin'i Metropolitan any Yeşiltepe [More ...]
Fanamarinana ny fanamarinan'ny fiaran-dalamby amin'ny Türk Loydu; Ny serivisy fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna nataon'i Türk Loydu ho an'ny fiara fitaterana an-dalamby dia nampidirina tao amin'ny faritry ny fankatoavana ny fenitra TS EN ISO / IEC 17065 avy amin'i TÜRKAK. Hoy i Türk Loydu'nun [More ...]
International Award mankany Istanbul Metro; Namboarin'ny Kaominina Metropolitan Istanbul, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro no nahazo ny loka voalohany tamin'ny sokajy "Rindran'ny fotodrafitrasa" tao amin'ny AEC Excellence Awards, iray amin'ireo fifaninanana madiodio manan-danja indrindra. Fotoam-pankasitrahana [More ...]
Ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fanajariana ny tanànan'i Mehmet Kurum, dia nanao fanambarana lehibe momba ny tetikasa Channel Istanbul! Ny tetik'asa adala ao amin'ny Vaomieran'ny drafitra sy ny teti-bolan'ny parlemantera. [More ...]
Karatra fitsangatsanganana maimaimpoana sy fihenam-bidy ho an'ny olona be taona ao Bursa; Ny fivondronan'i Bursa maimaim-poana sy ny fihenam-bidy amin'ny karatra 5. mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny olona efa misotro ronono rehetra [More ...]
Nitsidika ny garan-dalamby haingam-pandeha ambony Sivas Ankara ny governora Ayhan; Governemanta Sivas Salih mba handinihana ireo hetsika mitohy sy nomanina manerana an'i Sivas sy hanomezana ny serivisy ho an'ny daholobe araka izay tratra. [More ...]
Fihenam-bidy amin'ny saram-bahoaka ho an'ny mpianatra any Alanya; Ao Alanya, ny mpianatra dia handoa 2.25 fa tsy 1.80. Ny fivondronan'i Antalya Metropolitan dia nihaona tao Alanya fanindroany fanaleovan-tena momba ny fanapahana nataon'ny UKOME izay nahafaly ny mpianatra avy any Alanya. am-pivoriana [More ...]
Nisy tranonjaza iray niforitra tao Mersin nangalatra. Nahatratra azy ny polisy. Araka ny vaovao azo, ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) olom-pirenena iray nividy ny loha masiny scrapped ny fomba feno fitiavana, [More ...]
Ora amin'ny fanandramana 2019 İZBAN Inona ny ora İZBAN Fotoana Misokatra? Amin'ny firy no hikatona io?
Ora amin'ny fanandramana 2019 ExpZBAN, fotoana inona ny fanokafana İZBAN? Amin'ny firy taona izy io? İZBAN dia iray amin'ireo rafitra fitateram-bahoaka lehibe any an-tanàn-dehibe miaraka any fifandraisana amin'ny seranam-piaramanidina [More ...]
Fanohanana avy amin'ny TUVASAS mankany amin'ny fanentanana ny fambolena Sapling; TÜVASAŞ dia nanohana zana-boa aman-jatony an-jaton'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Ala miaraka amin'ny teny filamatra hoe Ol Breathe to the Future. [More ...]
Hividianana ny batterie 49 E1 Mety ho an'ny Rail 20 Quantity R 300 1 / 9 mijidina mony Monoblock Manganese Core amboary ny lalamby II sy ny Railway III Ferries vonona ny hampiasa PC [More ...]